Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah |
Your gaarka ah waa mid aad muhiim inoogu ah. Iyadoo la raacayo, waxaanu soo saarney Policy si aad u fahamto sida aan u ururiyaan, isticmaalka, isgaadhsiin iyo siidayn oo isticmaalaan macluumaadka shakhsiyeed. Socda ayaa lagu muujiyay siyaasada asturnaanta.
Ka hor ama waqtiga lagu ururinayo macluumaad shakhsiyeed, waxaan aqoonsado doonaa ujeeddooyinka macluumaadka la ururiyay.
Waxaan soo ururin doonaa oo ay isticmaalaan macluumaadka shakhsiyadeed oo keliya taas oo ujeedadu ahayd fulinta kuwa cayimay noo by iyo ujeedooyin kale oo lagu dhegeysan, haddii aan helo ogolaanshaha laga haysto shakhsiga ay khusayso ama sida sharcigu u baahan yahay.
Waxa keliya oo aanu hayn doonaa macluumaadkaaga shakhsiyeed iyo inta uu lagama maarmaan u yahay fulinta ujeedooyinka kuwa.
Waxaan soo ururin doonaa macluumaad shakhsi by hab xalaal ah oo cadaalad ah oo, halka ay ku habboon, oo leh aqoon ama ogolaansho ee qofka ay khusayso.
Warbixin-shaqsiyeedka waa inay noqdaan kuwo la xiriira in ujeedada ay tahay in la isticmaalo, iyo, ilaa xadka loo baahan yahay ujeedooyin kuwa, waa in sax ah, complete, iyo dib-u-taariikh.
Waxaan ilaalin doonaan macluumaadka shakhsiyeed by dhawrista ammaanka looga hortago wixii khasaaro ama xatooyo, iyo sidoo kale helitaanka aan la ogolayn, siidaynta, koobiyeynta, isticmaalka ama beddelid.
Waxaan ka dhigi doonaa sahlan loo heli karo in macluumaadka macaamiisha ku saabsan siyaasadaha iyo hab-dhaqanka la xiriira maareynta macluumaadka shakhsiyeed.
Waxaa naga go'an in qabashada ganacsigayaga sida waafaqsan mabaadi'da si loo hubiyo in macluumaadka shakhsiyeed waxaa ilaaliya iyo loo dayactiro.